Plants vs Zombies Heroes များကိုယခု Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည် Androidsis
J.Vargas | | Android ဂိမ်းများ
Plants vs Zombies ဂိမ်းများကိုအောင်မြင်စွာဖြတ်သန်းပြီးစီးသူများကိုယခုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အတွက်ခေါင်းစဉ်အသစ်ရှိသည်။ ထို့အပြင်အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်မှစ၍ Google Play စတိုးကိုရရှိနိုင်သည့်ဂိမ်းဖြစ်သည် အပင် vs Zombies သူရဲကောင်းများ.
PopCap နှင့် Electronic Arts တို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောဂိမ်းတစ်ခုနှင့်အတူခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုတင်ပြရန်အတူတကွလက်တွဲကြသည်။ အကြောင်းဖြစ်သည် အသစ်တစ်ခုကိုကုန်သွယ်ကဒ်ဂိမ်း, ဤဂိမ်းသည်ယခင်ခေါင်းစဉ်များနှင့်အတူအောင်မြင်ခဲ့သောကြောင့်၊ ဤအပင်နှင့်ဖုတ်ကောင်သူရဲကောင်းများသည်ဈေးကွက်ရှိဂိမ်းများမှ၎င်းနှင့်အနီးကပ်ဆုံးဆင်တူသည့်ဈေးကွက်များမှတိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်မှုအဖြစ်ဖော်ပြပြီးဖြစ်သည်မှာရှင်းနေပါသည် Royale ထိပ်တိုက်တွေ့ သို့မဟုတ် Heartstone ။
El နောကျတှဲရထား ဒီပွဲကိုသူတို့ပထမ ဦး ဆုံးကြေငြာခဲ့တဲ့မတ်လကတည်းကစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့သည့်ဂိမ်းကိုတင်ပြကြသည်။
ယခုသင်ရပါလိမ့်မယ် ဘေးထွက်ရွေးပါ, အပင်များနှင့်ဖုတ်ကောင်များနှင့်သင်၏ကုန်းပတ်ကတ်များနှင့်သင်၏ဇာတ်ကောင်အသစ်များ (ဘက်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်သူရဲကောင်းနှစ်ဆယ်အထိ) ကိုစတင်စုဆောင်းပါ။ တစ် ဦး ချင်းစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အမျိုးမျိုးသောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများမှတဆင့်အထူးနေ့စဉ်မစ်ရှင်များမှတဆင့်သင်သည်သင်၏ကုန်းပတ်၊ သင်၏ဇာတ်ကောင်များ၊ လိုအပ်သောအတွေ့အကြုံရရှိမှု ဒီဂိမ်း၏အမှန်တကယ်ပျော်စရာအချက်မှခုန်ရန်: multiplayer mode.
အခြားကုန်သွယ်ရေးကဒ်ဂိမ်းများနည်းတူ Plants vs Zombies သည်သင့်အားအခွင့်အရေးပေးသည် သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အွန်လိုင်းရင်ဆိုင်ပါသို့မဟုတ်သူစိမ်းများ။ ပြိုင်ပွဲများကိုအလှည့်ကျကျင်းပမည်ဖြစ်ရာပြိုင်ဘက်များများနိုင်လေဆုများများရလေလေအောင်မြင်မှုရရှိရန်နည်းဗျူဟာသည်လည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သော်လည်းသင်ရရှိထားသည့်သူများအတွက်ဇာတ်ကောင်များနှင့်စွမ်းရည်များကိုသော့ဖွင့်ရန်သင်ဆက်လက်အခွင့်အရေးရှိလာလိမ့်မည်။
အပင် vs. ဖုတ်ကောင်™သူရဲကောင်းများ
Play Store မှ Plants vs Zombies Heroes များကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည် အခမဲ့လျှောက်လွှာအတွင်းကွဲပြားခြားနားသောဝယ်ယူမှု၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူ။ ဂိမ်းအလေးချိန်သည် 49 megabytes သင်၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်တွင်အနည်းဆုံး Android version 4.1 ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » အပင်နှင့်ဖုတ်ကောင်သူရဲကောင်းများကိုယခုဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူနိုင်သည်
SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0၊ သင်၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်အတွက် flash drive
မူလ Google Pixel အဖုံးများကိုယခုမှာယူနိုင်ပါပြီ